Adikao izay tian'i HomePod holazaina aminao amin'ny masrix manazava azy mihetsika | Avy amin'ny mac aho
Adikao izay tian'i HomePod holazaina aminao ao amin'ilay matrix mihetsika manazava azy
Enina no fanjakana afaka mamorona ny HomePod amin'ny matrix LED ambony. Tsy miresaka momba ny efijery ambony isika satria tsy tena efijery mikasika, izy io dia faritra iray mikasika izay misy matrix LED kely izay tsy anaovana sary miaraka amin'ny antsipiriany be. Ny fampiasana an'ity matrix ity dia ny famoronana sary mihetsiketsika tena tsotra izay manampy anay handika izay tian'ny HomePod holazaina amintsika amin'ny fomba kanto satria azon'izy ireo natao ny nametraka LED vitsivitsy tsotra toy ny mpanamboatra hafa sy ny teny landy amin'ny zavatra tiany holazaina.
Rehefa miteny aho fa enina no mety fanjakana ao amin'ny matrix, dia izao, nandritra izao fotoana izao, Apple dia namorona fanjakana enina samihafa amin'ny HomePod ihany. Ny tsirairay amin'izy ireo dia mamela antsika hahita sary mihetsika amin'ny loko hafa sy manao hetsika hafa izay mety ho an'ny tsiranoka mihodina na faribolana iray izay mitombo sy mihena ny habeny.
Raha vantany vao ampodinao ny HomePod dia manomboka mihodina izy fotsy izay manondro fa manomboka indray ny HomePod. Afaka milaza aminao izahay fa io fihodinana io ihany dia miseho rehefa manavao ny fitaovana.
Ny HomePod dia hampiseho amintsika jiro fotsy amin'ny endrika pulsa izay misy faribolana mihombo sy mihena ny habeny rehefa vonona ny hamboarina aloha ny HomePod na rehefa mijanona ny fanairana na ny famantaranandro.
Ny fanjakana fahatelo dia ny mahazatra amin'ny asany. Isaky ny miteny isika hoe "Hey Siri" dia aseho ilay sariohatra Siri mihetsika. Boribory maro loko.
Ny fanjakana fahefatra dia a boribory miloko maitso izay mitombo sy mihena ny habeny. Miseho izany rehefa mandray antso an-tariby amin'ny HomePod isika. Mihoatra ny foto-kevitry ny hoe very hook, mamindra ny antso mankany amin'ny HomePod izy.
Ny matrix HomePod dia hampiseho a boribory mihodina mena rehefa mamerina azy io ianao na miverina amin'ny toeran'ny orinasa. Hiditra amin'ity maody ity Efa nohazavainay ny fomba hamerenana HomePod amin'ity lahatsoratra ity.
Ny fanjakana farany fa tsy fanjakana dia ny LED izay tsindrio ny + sy - sonia hampitomboana sy hampihenana ny habetsahana izay miseho miaraka amin'ny jiro maitso rehefa mamindra antso isika na rehefa manindry ny HomePod hahafahantsika mampiakatra sy mampidina ny volantsika amin'ny tanana. Ireo jiro ireo dia tsy an'ny matrix LED HomePod.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Adikao izay tian'i HomePod holazaina aminao ao amin'ilay matrix mihetsika manazava azy
Patent Troll VirnetX dia mahazo $ 500 tapitrisa hafa avy amin'i Apple